ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ ပလပ်စတစ်ထိုးသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် မှအရည်အသွေးမြင့် ပလပ်စတစ်ထိုးသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
TONG WEI ELECTRONIC., LTD. သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် ပလပ်စတစ်ထိုးသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwan နှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးခွင့်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအားဆက်ကပ်အပ်နှံကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများအမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆွေးနွေးအပြည့်အဝဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ရရှိနိုင်တယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုအမျိုးအစားအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Plastic Injection မှိုသည် thermoplastic သို့မဟုတ် thermoset ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်.Injection molding သည်ပလပ်စတစ်ကိုစီးသောအခြေအနေရောက်သောအခါဆေးမှုတ်စက်၏စည်တွင်းရှိအပူနှင့်အရည်ပျော်စေရန်ဖြစ်သည်။.အဆိုပါ plunger သို့မဟုတ်ဝက်အူ၏ဖိအားအောက်မှာ,အရည်ပျော်သောပလပ်စတစ်ကိုချုံ့။ ရှေ့သို့ရွေ့သည်,ပြီးတော့အနိမ့်သောအပူချိန်သို့ဆေးထိုးသွင်းလျင်မြန်စွာမြန်နှုန်းမှာစည်၏ရှေ့ဆုံးမှာ nozzle မှတဆင့်မှိုပိတ်လိုက်တယ်.အအေးနှင့် setting ကိုတစ် ဦး အချို့သောကာလပြီးနောက်,မှိုဖွင့်လှစ်သည်.ဤပုံသွင်းနည်းသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်.၎င်းတွင်အဓိကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်,တစ် ဦး ထိုး device ကိုနှင့်ညှပ် device ကို.ဆေးထိုးစက်အတွင်းရှိမှိုကိုအလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်.
စက်အများစုသည်အလျားလိုက်ဖြစ်သည်,ဒါပေမယ့်ဒေါင်လိုက်စက်တွေကိုအထူး application များအတွက်အသုံးပြုကြသည်.ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသတ္တုများပုံသွန်းနှင့်ဆင်တူသည်.အဆိုပါပစ္စည်းတစ်ခုအပူစည်သို့ထိုးသွင်းသည်,ရောနှော(အစိုင်အခဲကနေ viscous အရည်မှအရည်ပျော်)နှင့်မှိုသို့ညှစ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.injectionmolding.com.tw/my/plastic-injection-process.html
အကောင်းဆုံး ပလပ်စတစ်ထိုးသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် ပလပ်စတစ်ထိုးသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ